“Layaab iguma noqon doonto, haddii uu Maurizio Sarri ku biiro kooxda Juventus” – Gool FM
(Italy) 19 Maajo 2019. Madaxweynaha kooxda Napoli ee Aurelio De Laurentiis ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii ay dhacdo in Juventus ay sameyso saxiixa macalinka haatan leyliya Chelsea ee Maurizio Sarri.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa daabacay wareysi uu bixiyay madaxweynaha kooxda Napoli ee Aurelio De Laurentiis waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Tani iguma noqon doonto layaab, waxaan sidaan oo kale horey ugu arkay Gonzalo Higuaín, kaddib markii uu xirtay maaliyada kooxda Juentus, mana aheyn wax la yaab leh, waxay noqon lahayd arin xiiso badan”.
“Massimiliano Allegri waa shaqsi aad u fiican, wuxuuna ku cadeeyay qiimaha uu leeyahay sanado badan”.
“Waxaan ku fikiray isaga marka uu ku sugnaa kooxda AC Milan, laakiin markii uu ka tagay Rossoneri, waxaan si toos ah ugu dhaqaaqay saxiixa Rafael Benítez”.
Si kastaba ahaatee, warar dhowr ah ayaa waxay sheegeen in kooxda Juventus ay lasoo saxiixan doonto macalinkii hore Napoli ee Maurizio Sarri, si uu u noqdo badalka Massimiliano Allegri, kaasoo ka tagi doona Bianconeri kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Vincent Kompany oo Facebook ku xaqiijiyey kooxda uu Tababare iyo ciyaaryahan ka noqon doono kaddib markii uu ka tagay Man City